November | 2012 | Drtinshwe - သိပ္ပံနည်းကျ အိမ်ထောင် သည် ဘ၀ နှင့် အဆင့်မြင့် ဖိုမ စိတ်ပညာ
Drtinshwe – သိပ္ပံနည်းကျ အိမ်ထောင် သည် ဘ၀ နှင့် အဆင့်မြင့် ဖိုမ စိတ်ပညာ
dr tin shwe – Scientifical sex guide for couples
Chapter2တစ်ကိုယ်တည်း စိတ်ဖြေခြင်း (မာစတာ ဘေးရှင်း)
(၁) လိင်စိတ်သည် ကလေးဘ၀မှ စတင်သည်။
လူသားတို့ ၏ ခြေခံ စိတ်တွင် အစားအစာ စားသောက်လိုစိတ် နှင့် လိင်စိတ် (သို့) ဖိုမ ဆက်ဆံဖို့ စိတ်တို့ ပါဝင် သည်။ ကလေးသည် မွေးစမှ အစားအစာကို စားသည်။ သို့သော် လိင်စိတ်သည် အရွယ် ရောက်ချိန် ကျမှ နိုးကြွလာသည် ဟု ထင်ခဲ့ကြသည်။ ကလေးတို့သည် လိင်စိတ်နှင့် ပတ်သက် လျှင် ကင်းစင်ကြသည်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ သိပ္ပံ ပညာရှင်များ အလို အရ လိင်စိတ်သည် အပျိုလူပျို အရွယ်ရောက်မှ နိုးကြားလာသည် ဆိုသည့် အယူ အဆသည် မမှန်တော့ပါ။ မိမိ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် မှ ကလေးများကို သတိပြုကြည့်ပါ။ အသက်သုံးလေး ငါးနှစ် အရွယ်ကလေးက လိင်ကိစ္စ ကို စိတ်ဝင်စားမှု ပြနေသည်ကို တွေ့ရပါမည်။
ကျားလိင်တန်ဆာသည် ယောက်ျားလေးများ အတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးသော ပစ္စည်း ဖြစ်၏။ ဒါကလေးကို သူတို့ ဂုဏ်ယူ မဆုံးရှိကြသည်။ တပ်မတော် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးသည် သူဗိုလ်သင်တန်း တက်စဉ်က ဆုရရှိခဲ့သော ဓါးရှည်ကို ဂုဏ်ယူစွာ ထုတ်ပြတတ်သည့် သဘောအတိုင်း ဖြစ်၏။ သူတို့ လိင်တန်ဆာကို ဤမျှတန်ဖိုး ထားကြသည်။ သို့ကြောင့် ခါတနာ လုပ်ရန် အသေ အလဲငြင်းဆိုတတ်သည်။
ဤ PDF Ebook တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါ။
ဆရာဝန် တင်ရွှေ ဖိုမ ပညာ
Chapter 1, Dr Tin Shwe : အခြေခံ ဖိုမပညာ
ဤစာအုပ်သည် အိမ်ထေင်ကျပြီး နှင့် အိမ်ထောင်ကျရန် စီစဉ်ပြီး မောင်မယ်တို့ အတွက် ရည်မှန်းပါသည်။ ဖိုမ ကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်လျှင် အခြေခံ ရှိပြီးသူများဟု ယူဆပါသဖြင့် အခြေခံ ဖိုမပညာ မှ အရေးကြီး သော အချက် အချို့ ကိုသာ အောက်တွင် အကျဉ်းချုံး၍ ဖော်ပြပါသည်။
ယောက်ျား လိင် အင်္ဂါများ နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ကပ္ပာအိတ် ထဲတွင် ဝှေးစေ့ရှိသည်။ ဝှေးစေ့မှ ဆီးလမ်းသို့ ဆီးအိမ် အောက် အကျိတ် (ပရောစတိတ်ဂလင်း ) အတွင်း တွင် ပေါင်းစပ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျားလိင်တန် ဆာမှ သုက်ရည်ရော ဆီးပါထွက်သည်။
သုက်ရည်တွင် ဝှေးစေ့မှ သုက်ပိုးများအပြင် သုက်အရည်ကြည် သိုလှောင် အိမ်မှ ထုတ်ပေးသော အကျိ အချွဲရည်နှင့် ဆီးအိမ် အောက် အကျိတ် (ပရောစတိတ် ဂလင်း ) မှ ထုတ်ပေးသော အရည်များ ရောနှောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သုက်ရည် တွင်ဆီးမပါ ပါ။ ဆီးသားလျှင် သုက်ရည်လမ်းပိတ်နေပြီး သုက် လွှတ်လျှင် ဆီးအိမ် တံခါး ပိတ် နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ရည် တစ်ဇွန်း လောက် ရှိသော သုက်ရည် တွင် သုက် ပိုး ကောင်ပေါင်း သန်း ၂၀၀ မှ သန်း ၃၀၀ အထိ ပါဝင်သည်။
Welcome to Dr Tin Shwe Blog.
This blog is not running by Dr Tin Shwe.
I just created this blog for the couples
ဖို + မ စိတ် ဆန္ဒ ကုန်ခမ်းသော အမျိုးသမီးများ – Dr Tin Shwe
drtinshwe တစ်ကိုယ်တည်း စိတ်ဖြေခြင်း ဖိုမ ပညာ